Xaajo.com: Somaligalbeed news provider in the net
Home | Forum |Subax wanaagsan | Dhacdooyin | Waraysiyo | Contact Us
You're here >> News Details
�Sirta Culus ee ka danbeysa In ONLF la dagaasho MJXSG, Jubooyinkana dagaan!
Gardaro Garab og, Gaajo guri og iyo Xanuun Geeri og, midna lama kaco! Waa maahmaah Soomaaliyeed oo la adeegsado marka la arko ififaalayaal aan waxba laga qaban karin waxwalba oo la isu geeyo. Maanta xaaladda Gobolka Ogaadeenya waxaa taariikhda markii ugu horeysay ka dhacaya dagaal aan micno iyo caqli ku imaan. Ma ahan dagaalkii beelaha ee biya dhulka ama ceelasha, mana ahan dagaal u dhaxeeya gaal iyo Islaam, kumana saleysna colaad sokeeye ama mid shisheeye, mana ahan mid horey loo yaqaaney. Dagaalkani waa mid lagu taageerayo Tigree, waana mid wadnaha goynaya dhamaan bulshada Ogaadeenya yar iyo weyn. Waa mid waxa ka farxa uu yahay Zenaawi, waxa kanaxana uu yahay Islaam iyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan midda Soomaaligalbeed. Waa mid anfariir iyo amakaag ku ah dadkii hamigoodu ahaa iney Tigree la dagaalaan. Dagaalkani waa mid aakharo iyo adduunba la isku haysto su aalo badanna ay kadanbeyn doonaan. Waa mid ku lid ah diinta islaamka waana mid kasoo horjeeda dhaqanka iyo taariikhda deegaanka iyo dhulka uu kasocda. Haddaba waa Maxay Dagaalkani
Dagaalka Islaam iyo Shahaado diidka
8 dii sano ee udanbeysey dunida waxaa kusoo kordhey dagaallo badan oo laga hayay meelo aad u fogfog dhamaantoodna lahaa hal u jeeddo. Dawladdii uu Bush ka hormuudka ahaa waxey dunida muslimka iyo dhamaan dagaalada ay kula jiraan gaalada ku bilaabeen kala furfur iyo isku dir iyagoo isticmaalay labo arimood. Midda hore lacag aad u badan oo qofka aan iimaanka lahayn wareerisa iyo midda labaad balanqaadyo aan waxba ka jirin. Dunida kale ha joogtee geeska Afrika waxaa dalka Jabuuti yimid ciidamada Maraykanka oo ujeedkoodu yahay islaam iyo diin nacayb. Ciidamadani waxey xidhiidh toos ah lasameeyeen qabqablayaashii Soomaaliyeed oo ay lacag waalan siiyeen kuna baraarujiyeen iney soo qabtaan cidwalba oo calaamad diin leh iyo dadka dacwada diinta fidiya.
Waan wada ognahay waxii ka dhacay Soomaaliya ee aan kusoo hakado gobolka Ogaadeenya. Ciidamada Maraykanku waxay yimaadeen gobolka waxeyna tageen meelo badan iyagoo dagaan ka dhigtey magaalada Godey. Intii ay ciidamada Maraykanku sugnaayeen magaalada Godey waxey si caadi ah ugu bixi jireen baadiyaha halkaasoo ay kula kulmi jireen ciidamada ONLF iyagoo muddo la maqnaan jirey. Muddo markii xidhiidhkaasi socdey ayaa waxaa shaki weyn muujiyey dawladda Ethiopoia taasoo keentey in la amro in Maraykanku kasoo baxo magaalooyinkaas iyadoo dawladda Ethiopia ay ku eedeysay Maraykanka iney ONLF la xidhiidheen. SIyaasi weyn oo Maraykan ah waxna ka qora arimaha Geeska Afrika ayaa qirey in Ethiopia iyo Maraykanku ay laba dagaal ku kala jiraan Isagoo ujeedey in Maraykanku la dagaashanaa Islaamiyiinta, meesha Ethiopiyana ay la dagaashantahay waxwalba oo dawladdeeda kasoo horjeeda.
Dhanka kale Maraykanka fikirkiisu waxuu saacidayaa dawladda Tigreega waqtiga fog sababtoo ah marka uu Maraykanku la heshiiyo ONLF hawlna u dirsado waxuu marka ugu horeeya ku qanciyey inay la dagaalamaan urur walba oo diin ku lug leh oo gobolka ka jira. Taasi waxey keeneysaa marka ugu horeysa in labo wiil oo walaalo ah ay xabbad isku qaataan dhiigooduna isu banaanaado. Taasi waxey Tigreega u badbaadineysaa ciidan badan waxayna naxdin iyo walbahaar ku tahay shacabka oo joojinaya taageerada iyo qaaraankaay siiyaan ururka. Sababtoo ah cidna marabto lacagtey u bixiyeen in Tigree lagula dagaalamo lagu dilo wiil walaal ah oo Muslim, ah Soomaalina ah una dhashey waddanka. Waqtiga dheer hawshani waxey caawineysaa Zenaawi waxeyna soo dadajineysaa burburka ururada .
Maxaa ONLF waalay oo ku qasbaya?
Xidhiidhkan Maraykanka ONLF waxuu iyada u ahaa guul maaddaama oo ay quwaddii dunida ugu weyneyd layeesheen xidhiidh kusaleysan danaha gaarka ah ee Maraykanku ka leeyahay geeska Afrika. Maxamed Cumar Cismaan waxuu khudbad ku jeediyey isagoo jooga dalka Maraykanka in waxii hadda ka danbeeya inaan loo baahneyn qaaraanka shacabka ururka ONLF-na gaadhey isku filaansho. Waxaa xigey wareysiyadii saxaafadda ee ahaa urur diini ah uma ogolin waddanka, iyo anagu diin shuqul kuma lihin umana dagaaleyno. Culimada diinta aqoonta u lihi waxey sheegaan in Jihaadka ama dagaalka barakeysani uu yahay midka ujeedkiisu yahay in diinta lagu koryeello, qofkii waxkale ku dagaalamana isagaa ka jawaabi doona.
Il Ribix argta Rixin ma eegto" Dhibaatada umadda ka dhawaajisey waxaa ka wanaagsan xidhiidhka hoose iyo dhaqaalaha soo galay ururka kaasoo xitaa diintii islaamka dhinac isaga dhigaya isla markaana baneeyey in la laayo qof islaam ah oo aan waxba galabsanin. Xaggeyse ku danbeyn.
ONLF iyo Ereteriya
Xidhiidhka ka dhaxeeya Afwerki iyo ONLF ayaa ah mid kusaleysan daneysi iyo cadawgaaga cadawgiisu waa cadawgaa. Afwarki waxuu col caadhgoys la yahay Zenaawi daahirka iyo inta muuqata sidaas darteed waxuu xarun usameeyey dhamaan mucaaradka Ethiopia waxuuna gaar ahaan ururka ONLF siiyey talooyin dhawr ah oo ay sitoos ah u hirgaliyeen intii xidhiidhkaasi bilawday:
Midda 1aad: In ONLF ay shacabkeeda ka adkaato gacan adagna ku qabato. Markaad dib u eegto dhacdooyinkii Caado, Wardheer, Shiniille, Dalaad, Gudhis, Baarguun, Boodhcaano, Dhagaxbuur waxaad arkeysaa in fikirkaasi shaqeyayay ayna ujeedadu ahayd in shacabka cashar adag loo dhigo. Waxii intaas ka horeeyey qof iyo mid mooyee madhicin in ONLF ay dad badan oo isla socda disho.
Midda 2aad: In askart lagu daro dumar badan oo ay ciidamada la gaardiyaan, Tuuto xidhaan, guuro iyo geeddina la socdaan kuna dhexjiraan ragga. Arintani ayaa aad uga muuqata xiligan ciidamada ONLF. Arintani waa mid ku cusub dhaqanka Islaamka iyo dhaqanka uraradii kasoo dagaalamay waddanka. Waxeyna lamid tahay dhaqankii Tigreega iyo Erateriya markii ay la dagaalamayeen ciidamadii Mingiste. Ma haboontahay mise ma haboona waa su aal kale,?
Midda 3aad: Xabadda ONLF iyo Tan Tigreega yaan loo dhaxeynin: Tani waxaa looga jeedaa in la isku diro dagaalna uu dhexmaro cid walba oo damacda iney gobolkaas dagaalka gasho. Sadexdan talo waxaa si daacad ah u fuliyey madaxda ONLF taasoo aad kawada dharagsantihiin.
Magac aad doonta la baxa oo dagaalama
Waxaad in badan maqashay madaxda ONLF oo marka la weydiiyo sababta ay magaca Ogaadeen ula baxeen iyadoo ay jiraan qabiilo badan oo dalka daga oo aan ku qanacsaneyn dagaalka waxey ku jawaabi jireen haddii aadan ku qanacsaneyn magaceena magacaad doontaan la baxa oo la dagaalama Tigreega markaan waddanka xoreynana aan isaga nimaadno magacaan waddankaan u bixin lahayn waddanka. Arintaasi eegga waa cirka waa utuur.
Dhoobley iyo Jubbooyinka!
Iyadoo bulshada Soomaaliyeed yar iyo weynba ay ka dharagsantahay dagaalada murugada leh ee udhaxeeya ONLF iyo MJXSG ayaa waxaa dhacdey in madaxda ONLF garabka MAxamed Cumar ay ka fogaadeen saxaafadda kadib markii ay isku wargaliyeen ineysan marnaba ka hadlin dagaalkaas danahoodana ka raacdaan. Sababtuna waxey tahay Maraykanku marnaba ma rabo in labadaas urur marnaba uu wadahadal dhexmaro ayna heshiiyaan taasoo soo dadjin kareysa jabka Tigreega. Qaylo badan oo kasoo yeedhey bulshada Ogaadeenya ayaysan ONLF marna dhag jalaq usiin. Qaylada iyo calaacalka shacabkana waxaa uga muhiimsan dardaaranka Afwerki oo ahaa yaynaan Tigreega la idiin dhaxeynin iyo midkii Maraykanka oo ahaa Islaamiyiin iyo idinku kulan aan dagaal ahayn ma lihidin.
Markii ONLF ay fulisey qayb kamid ah qorshihii "Ashahaada La dirirka" ee gobolka OGaadeen ayaa waxaa qandaraaskii loo qaadey dhanka Jubooyinka si hawshaas oo kalena ay uga hirgasho Jubooyinka. Maxamed Cumar Cismaan waxuu amrey in ciidamo lagu aruuriyo gobolkaas kuwaasoo dadka loo sheegey in lagu tababari doono. Xoogagga Islaamiyiinta oo awalba ka warhayay xidhiidhka ONLF iyo Maraykanka ayaa markiiba kasoo horjeedsadey in ONLF halkaas ciidamo geysato. Muddo dheer iyo wadahadallo kadib, waxaa dhacay dagaal ay ciidamada Muqaawamadu ku qaadeen meeshii ay ONLF isku aruursatey. Waxa layaabka ahaa waxey ahayd in madaxdii ONLF ee laga waayey in marnaba ka hadlaan dagaaladii ka socdey Ogaadeenya ay kusoo dagdagaan iney saxaafadda la hadlaan.
Haba hadlaane Kaarkee ayaay ciyaarayaan: ONLF meesha ma joogto, yagoo dhanka kalena saxaafaddooda u isticmaaley iney dhahaah waxa lasoo weeraray waa beel "ABSAME".Nasiib daro cidda loo sheegeayo ama lagadayo sheekadan waa isla beeshii Absame oo sida dayaxa ula socatay sheekada Jubooyinka. Ciidamadii meesha weeraray waxaa watey Dul Yaddeyn, waxaa sidoo kale ka hadley gudoomiyaha ku xigeenka Kismaayo Sheekh Cabdiqani iyo Ku xigeenka Nabadgalyada magaalada Kismaayo Sheekh MAxamed Sahal oo dhamaantood ah beesha Absame ahaana raggii la dagaalamay Qabqable Barre Hiiraale. Waxaa maalmo ka hor ciidamadani ay hubka ka dhigeen ciidamadii Khaalid Bin Waliid.
Absamah Ogaadeenya joogaa in laga hadlo dagaalkiisa ama lasheego waa ka xaaraam ururka ONLF garabka Maxamed Cumar Cismaan waase waa iska caadi in raadiye iyo Website lagu qoro in Absame lasoo weeraray oo beesha Absame ay difaac ku jirto. Haddey beel wax iska celineyso Barre ayaan ka baxeen Kismaayo oo haystey sanado badan. Haddii Absame la weerarayo maxaa Afmadoow loo soo dhaafey iyo Kismaayo oo laga soo dooney Cali Bulleey? Kuwa Soo weerareyse waa kuwee? Ma fogeyn maalinkii Bare Hiiraale Dhoobley dabka galiyey, ONLF-na waxba kama aysan qorin. Illaahay mahaddiis Absame iyo Ogaadeen dhamaantood ay ogyihiin xaqiiqada iyo sida wax u jiraan.!
Maxamed Cumar Cismaan oo kasoo kicitimey dalka Tansaaniya ayaa soo gaadhay magaalada Nairobi si qarsoodi ah maalin ka hor dagaalkii Dhoobley. Maxamed Cumar ayaa si qarsoodi ah kusoo galay magaalada Nairobi isaga oo ay weheliyaan labo nin kuwaasoo midkood kasoo raacey magaalada Casmara midka kalena uu ka yimid dibadaha. Cismaan ayaa lashirey safaaradda Maraykanka isagoon marnaba la hadal lana kulmin taageerayaasha badan ee ONLF ee kusugan magaalada Nairobi. Maalinkii uu ka duuley Nairobi waxuu ukicitimey dalka Jabuuti iyadoo maalinkii ku xigteyna uu dhacay dagaalkii dhacay. Labo maalmood kadib ayuu hadana kusoo laabtey magaalada Nairobi walina ma jiraan cid uu arkey isagoo daggan meelo qarsoodi ah oo aan la arkin karin waxa kaliya ee la xidhiidha shaksiyaad kooban. Maxamed Cumar Nairobi wuu joogey Arbacadii ina dhaaftey iyadoo aanaan ogeyn inuu eegga kusugan yahay. Adigaan kuu daynayaa waxii xukun ah!
Madaxweyne Bush waqtigiisii waa dhamaadey!
Xumaan iyo wanaagba waxii uu Bush dunida baray waxaa soo dhawaatey waqtigiisii uu ku noqon lahaa gurigiisii Taxes. Waxaana laga yaabaa in siyasadda Maraykan ee arimaha dibaddu wax iska badali doonto. Adduunna dib u badan, taariikh ayaana ka hadha ee ragoow dib wax ula hadha.
Indha la aan
ONLF qof garankara maanta ujeedkeeda ma jiro xitaa dadkii taageerayaasha ahaa marka laga reebo dhawr ruux oo iyagu kamid ah ragga heshiisyadan galay. Waxaa kale oon dhamaanteen makhraati ka ahayn in ONLF heshiis la gashey ururo Axmaaro ahaa waxii intaas kadanbeeyeyna ay ONLF ay baddashey luuqaddii aheyd waxaan nahay xornimo doon oo ay uwareejiyeen waxaan nahay Ethiopian xaquuq doon ah. Marka la isku geeyo waxa dhacaya iyo waxa muuqda waxaa soo mudhbaxaysa in Zenaawi uu gacanweyn ku leeyahay siyaadda ururka ONLF ayna caddahay in ururku uusan lahayn jiho lagu hirto oo muuqata.
Runtii waxaa jira madax badan oo ka tirsan ururka oo aan ku raacsaneyn jananka hawshan dagaal ee uu oogey balse aan wali waqti u helin iney la hadlaan kalana xaajoodaan arimahan. Sarkaal sare oo ka tirsan garabka Maxamed Cumar ayaa noo sheegey iney ka warsugayaan Maxamed Cumar isaga iyo qaar kale oo sarsarena aysan marnaba ogolaan doonin jihadan iyo heshiisyadan uu Maxamed Cumar qaatey. Arinatan ayaa horseedi kareysa in madaxdani ay ka tagaan garabka Maxamed Cumar kuna biiraan Dr Siraad Doolaal ama ay garabkale sameystaan. Waase loo Joogaa! Illaa iyo hadda waxuu loo fuliyey ONLF oo la arkey ma jiro, balse iyagoo 100kiiba 200 ayay waxwalba oo laga dalbadey qaddimeen xitaa haddii ay ahayd iney laayaan walaaladood dhiigna daadiyaan!
Maxaa Loo heshiin waayey
Tan iyo intii dagaaladan bilawdeen waxaa bulshada oday iyo waxgarad la isku dayay in arintan la xaliyo. Si loo xalliyo waxaa is qabanqaabiyay guddiyo badan oo meelo kala duwan jooga. Markii ay odayadaasi damceen iney hawshaas galaan labada ururna isu keenaan waxaa soo baxdey in ONLF ay tidhaahdo kolla nimankaas lama fadhiisanayno sababtoo ah waa lagu raadjoogaa mana rabno in lagu arko. Arintaasi waxey horseedey in markey doonaanna ay weeraraan.
Waxaan hubnaa inaad maalmaha soo socda ururka ONLF uu si hoose u burburi doono iyadoo ka imaan doonta ineysan dhamaan akarta ONLF aysan isku raacsaneyn iney la dagaalamaan wiilal aan waxba galabsanin. Boggan Xaajo oo 5tii sano ee udanbeysey wax ka qorey deegaanka waxuu maanta ka digayaa burbur dagdag ah oo kusoo foollleh ONLF iyo iney isku dhiibaan ciidamada Tigreega haddii aan xal dagdag la helin.
Haddii aysan xaaladdu is baddalin waxaan soo gudbin doonaa Magacyada dadka ka danbeeya qaska oo dhan anagoo sidoo kale soo bandhigi doona caddeymo aad la dhakafaari doontaan. Fallaadhii Cirka loo ganayna ninwalboow filo!
Print This Article comments (0)
Home | Dhacdooyin | Waraysiyo | Subax wanaagsan | Contact us
Waftiga Kililka oo ka run sheegey iney soo daayaan Maxaabiista DDS(Fariin iyo Maxaabiis lasii daayay)
Ciid Mubaarak, Sanadkan kiisa eebbe kheyr iyo nabad ha inagu gaadhsiiy
Illaahay Mahaddii Waa lasoo daayay iyagoo badqaba 4 maalmood kadib
Sidee loo qaybiyaa Miisaaniyada DDS maxaase lagu saleeyaa?
Dalab Zakaatul Fidhriga: Illaahay Dartiis agoontan Ka farxi Zakaatul Fidhriga
Ogeysiis:Mashruuca QEF UK oo shir ku qabanaya magaalada London
Dhanaan iyo Afduub kale: 7 Muwaadhin oo laga afduubtey Burqayar Qalanjo!
ONLF garabka Maxamed Cumar oo Dad shacab ah ku xasuuqey duleedka Nusdariiq
POEM: Ogaden heroes don�t die. The first ogaden Dr killed in Action! By S.A. Abdirahman
Gardaro: Maanso ku saabsan Falastiin. WT Yuusuf X C/hi
Is ONLF Motives Questionable? You Bet! By Nuur Hassan
Galkacyo: Ooda uu Jiidayo Maxamed Cumar Ma Baa,bin Raadkii Xubnihii ONLF-tii la Dhiibay?
Onlf iyo Wayaanada koodee noo yare roon?WQ Daahir
General Mohammed Omar Osman(ONLF) oo ku socda Jidkii General Ferdinand Marcos(Philipine)
Gabay Cusub oo ka hadlaya xaaladda Ogaadeenya. WT Cabdi A Wali
Godob iyo God Intee le�eg Ayaad Qodi Kolay Galbataye. WQ Maxamed K Daahir
Cabdiraxmaan Maadey hadalkiisu maanka ma galaa? WQ Xaaji Askar
Canaan Iyo Waano Ku Socota Dadkeena Sharafta Leh ee Soomaali-Galbeed (Ogadeniya)!!
Lamood Maxamed C. Cismaan Noqonsewaa. WQ Maxamed K Daahir
Dhalleeceyn ku wajahan bogga Xaajo.com. WQ A .M Abiib
Kamidnoqoshadii ONLF ee ciidamada difaaca Tigreega. WQ M Yuusuf
Beena ha sheegin Runa hasheegin waxaad Sheegtana hawaayin.
DAGAALKA DHEXMARAYA ONLF IYO UWSLF MAXAA KEENI KARA YAYSE DANI UGU JIRTAA ?
Copyright ©2006 Xaajo.com Designed by Somalitech.com